Akụkọ - Ihe dị iche na sweta na sweta
Echiche na sweta bụ ụdị akwa mkpuchi. Knitwear bụ echiche sara mbara. Enwere ike ikewa uwe Knit uwe n'ime owu na owu na ajị anụ, na ajị ajị nke nke ajị anụ ajị anụ. Uwe a kpara akpa nke anyị na-ezo aka n'ozuzu na-ezo aka na akwa ndị a kpara akpa site na ngwa ọrụ. Elu bụ ezigbo ugwu na ajị ajị ajị ajị ajị ajị ajị ajị ajị ajị ajị ajị ajị agba l’usia, owu kfuru ọwhu nọ l’ẹka Nchileke. Uwe a kpara ajị anụ anaghị eme. A na-eji akwa akwa akwa akwa akwa site na diski. Ọsụsọ ndị anyị na-ekwukarị banyere ha bụcha uwe ndị ejiri eri ajị ajị anụ kpuchie, uwe mwụda jikọtara ọnụ bụ ọkachamara ọkachamara banyere omenaala. N'ozuzu, uwe ime, uwe egwuregwu owu, sọks, wdg.
Knitwear na-abụkarị ọgaranya na drape na mmetụta ahụ. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ngwakọta na egwuregwu egwuregwu kpara mara mma dabara nke ọma maka ụmụ agbọghọ. Họrọ agba agba siri ike ejiri akwa swit nwere uwe dị mkpụmkpụ na akwa swiiti nwere akpụkpọ ụkwụ Martin. Uwe mara ezigbo mma, uwe mwụda ahụ ekwesịghị ịdị ogologo. Na ihu igwe oyi, ọ bụkwa nhọrọ dị mma ịhọrọ buut snow curled. Nchikota a bu ejiji, ohuru, nke mara mma na ihe mara nma.
Mmetụta na-adịghị mma nke ọsụsọ ejiri, dị ka uwe, nwere ike igosipụta ụdị European na America. Ọ bụrụ na ị na-eyi akwa dị gịrịgịrị nke dabara adaba, uwe mkpụmkpụ denim ga-agbakwunye ntakịrị ọkụ ọkụ. Uwe aja aja na jaket a kpara nke nwere sketị na-eme ka ị yie sexy juputa na amara. Mmetụta dị mma nke knitwear nwere ike ime ka ara gị na hips gị zuru ezu, ebe sọks ojii na-agbatị ma belata ahịrị ụkwụ gị. Emeela ka amara ụmụ nwanyị pụta ìhè. Y’oburu na ị yikwasị akwa a kpara nke ọma, ị daghị oke ka snoo siri ike. Ugbu a, a na-ekechi obere ịchafụ n'olu n'olu, nke na-ewu ewu ma na-emesapụ aka.